Gudoomiyaha degmada Hodon oo si kulul u eedeysay milateriga Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaha degmada Hodon oo si kulul u eedeysay milateriga Soomaaliya
Mareeg.com: Gudoomiyaha dhawaan la magacaabay ee degmada Hodon, Xaawa Maxamuud Cali (Kiin) waxey ku eedeysay milateriga Soomaaliya iney dadka boobaan, ayna hubka isaga dhex sitaan dadka.
Xaawa Kiin oo la hadashay mid ka mid ah Idaacadaha Muqdisho ayaa iyadoo carreysan sheegtay in ciidan milateri ah oo la dejiyey Warshadda Caanaha ay rasaas ku garaaceen gaari uu watay gudoomiyaha Waaxda Taleex ee degmada Hodon kadibna ninkaas ku xireen Warashadda Gaashaandhiga.
“Ciidan dhawaan la tababaray oo deggan deegaanka Warshadda Caanaha oo maalmahaan qalalaaso dhul ka taagnaa, ayaa rasaaseeyey gaariga gudoomiye waaxda Taleex ee degmada Hodon, kadiba wey xireen, iyagoo geeyey wasaaradda Gaashaandhiga” ayuu tiri Xaaw Maxamuud Cali.
Xaawa ayaa sheegtay iney isku dayday iney tagto halkii lagu xiray mas’uulkaas, loola dhaqmay si xun sida ay tiri “Markii aan tagnay meesha mas’uulkaas lagu xiray si sun ayay askartu noola dhaqmeen”.
“Askarta melateriga ah ee la keenaya qeybo ka mid ah degmada Hodon waxey kusoo faafaan xaafadaha, waxeyna boobaan dadka,” ayay gudoomiyaha cusub ee Hodon tiri.
Gabadhan ku cusub xilka gudoomiyaha degmada Hodon, horayna uga shaqeyn jirtay warbaahinta Muqdishom xubinna ka ahaan jirtay bulshada rayidka ah, ayaan sheegin iney si hoose ula hadashay mas’uuliyiinta milateriga Soomaaliya iyo inkale.
Warka kasoo yeeray gudoomiyaha degmada Hodon ayaa saameyn ku yeelananaya sumcadda milateriga Soomaaliya oo dowladdu ku celceliso in dhaqankoodu soo hagaagayo, horayna loogu eedeyn jiray inaan qaarkood laga amaan heleyn.
Mooshinka ka dhanka ah baarlamanka Juba oo socda & Debadbax ka dhacay Kismaayo
Gabdho Somali Kenyan oo shaaciyey iney ku biireen Khalaafada Islaamiga ah